मध्यपुर थिमी नपामा ‘भद्रगोल’ ! – indepth.com.np
मध्यपुर थिमि नपाको विशेष नगरसभामा सहभागी उपप्रमुख अञ्जना मधिकर्मी (बीचमा) लगायतका सहभागी । तस्बिरहरु : इन डेप्थ
भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा नगर प्रमुखले स्थगित गरेको विशेष नगरसभा उपप्रमुखको नेतृत्वमा सम्पन्न गरिएको छ । नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बुधबार बिहान ११ बजेको लागि विशेष नगरसभाको आह्वान गरेका थिए । तर तयारी पूरा नभएको भन्दै उक्त ११ बजे नै सूचना टाँस गरेर नगरसभा बुधबार नै दिउँसो २ बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको थियो ।
सूचनाअनुसार २ बजेपछि पनि नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ सभास्थल नआएपछि उपप्रमुख अञ्जना मधिकर्मीको अध्यक्षतामा विशेष नगरसभा सम्पन्न गरिएको हो ।
उता उपप्रमुख मधिकर्मीको अध्यक्षतामा नगरसभा चलिरहँदा नपाका प्रमुख श्रेष्ठले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि विशेष नगरसभा स्थगित गरिएको अर्को सूचना निकाले । नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको छ, आज मिति २०७६ असार १८ गते बुधबार दिनको २ः०० बजे, कृषि विकास तालिम केन्द्र, बोडेको सभाहलमा बस्ने गरी निर्धारण गरिएको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको विशेष नगरसभाको बैठक प्रदेश नं. ३ प्रदेशसभाद्वारा जारी भएको नगरसभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोजिमको परिस्थिति उत्पन्न भई नियमित रुपले सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने भनी नगरसभाका अध्यक्ष एवं मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुखज्यूले सोही दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गर्नुभएको व्यहोरा सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
नगर प्रमुख श्रेष्ठले जोड गरेको दफा १९ मा नगरसभाको क्रममा भद्रगोल हुनसक्ने सम्भावना भए नगरसभा स्थगित गर्न सक्ने अधिकार सभा अध्यक्ष एवं नगर प्रमुखलाई दिइएको छ । उक्त प्रावधानअनुसार सभा अध्यक्षले स्थगित गरेको तथा सभा अध्यक्ष अनुपस्थित भएको नगर सभा वैधानिक नहुने तर्क अघि सारिएको छ ।
स्थगितको सूचना प्रकाशित गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बराल पनि विशेष नगरसभामा उपस्थित भएनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नगरसभाको सचिव हुने प्रावधान रहेको छ । जसअनुसार विशेष नगरसभाको सचिवको जिम्मेवारी सभाअध्यक्ष मधिकर्मीले प्रशासन महाशाखा प्रमुख केशव सिलवाललाई तोकेकी थिइन् ।
विशेष नगरसभाले नगर प्रमुख श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने म्यान्डेट दिएको छ । प्रमुख श्रेष्ठ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १६ को उपदफा ‘क’ मा भएको नगर प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर गएर आर्थिक कारोबार, तोक, आदेश र टिप्पणीका आधारमा फाइल उठाई योजना सञ्चालन गरेको भन्दै उक्त कार्य सम्बन्धमा छानबिन गर्न नगरसभाले म्यान्डेट दिएको नपाका प्रवक्ता एवं वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष राम थापामगरले जानकारी दिए ।
उनले सोही छानविन गर्न माग गरेकै आधारमा प्रमुख श्रेष्ठले नगरसभा छल्न स्थगित गरिएको सूचना प्रकाशित गराइएको आएको आरोप लगाए ।
‘नत्र आफैले आह्वान गरेको नगरसभा एकतर्फी सूचना निकालेर स्थगित गरिएको भन्नुपर्ने अरु कारण छैन’, उनले भने ।
उनका अनुसार विशेष नगरसभाले अघिल्लो नगरसभाले बढाएको केही करहरु घटाउने निर्णयसमेत पारित गरेको छ ।
विशेष नगरसभालाई वैधानिक बनाउन आफूहरु संघर्ष उत्रनेमा पनि प्रवक्ता थापामगरले सुनाए ।
उपप्रमुख मधिकर्मीसहित दुईतिहाइभन्दा बढी कार्यपालिका सदस्यहरुले एक महिनाअघि नै विशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा नगर प्रमुख, तीनजना वडा अध्यक्षबाहेक उपप्रमुखलगायत सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित भएका छन् । प्रमुख श्रेष्ठ तत्कालीन एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गठबन्धनबाट निर्वाचित भएका थिए । जुन गठबन्धनले वडा नं ५ मा एमालेको तर्फबाट र वडा नं. ८ मा नेमकिपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । वडा नं. ७ मा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
बुधबार भएको विशेष नगरसभामा प्रमुख श्रेष्ठ र वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष अमृतमान श्रेष्ठबाहेक सबै वडा अध्यक्ष उपस्थित भएका छन् । त्यसैले पनि विशेष नगरसभा वैधानिक हुने प्रवक्ता थापामगरको जिकिर रहेको छ ।
‘पत्रकारले स्थानीयकरणलाई जोड दिनुपर्छ’